SU'AALAHA - ZNZK
Biyaha ay isticmaalaan musqulahayada faaruqintu aad ayey u hooseeyaan, kaliya 0.5L / biyo raac.
Fursadaha qorshaynta ee la kordhiyay
Tuubooyinka waxaa lagu rakibi karaa si toos ah saqafka iyo xitaa derbiyada khafiifka ah, maxaa yeelay nidaamyada faaruqintu waxay bullaacadda bullaacadda kor uga qaadi karaan musqusha. Nidaamka musqusha uma baahna foorar gaar ah oo lagu dhiso.
Nadaafada oo kordhay iyo dhaqdhaqaaqa hawada oo sifiican uga socda goobaha nadaafada
Looma baahna in la rakibo hawo qaadashada. Musqulahayaga faaruqintu waxay si wax ku ool ah u soo saaraan 30 - 40L ur iyo ceeryaamo agagaarka / korka bullaacadaha ah sidaa darteed way ka raaxo iyo nadaafad badan yihiin.
Majiraan shaqo leben iyo shaqo la taaban karo
Shuruudaha booska hoose iyo kharashyada tuubooyinka
Si fudud u rakib oo si fudud u dayactir.
Faa'iidooyinka Dhismayaasha Dhismayaasha
Looma baahna xirmooyinka carrada.
Dhuumaha tuubooyinku waa la mari karaa caqabadaha iyo hareeraha.
Waxay awood u siisaa naqshadeeyayaasha inay ku kasbadaan dhibcaha LEED dhismaha cusub.